Chinese mahunyanzvi anokwanisa kuwedzera iyo RAM uye SSD yeApple Silicon | Ndinobva mac
Chinese mahunyanzvi anokwanisa kuwedzera iyo RAM uye SSD yeApple Silicon
Apple haifarire izvo zvaunogona tinker zvakawanda pamidziyo yako. Kwete padanho revashandisi, ndiani asingachinje bhatiri riri nyore reiyo iPhone, uye hazviite kuti zvive nyore kune nyanzvi dzehunyanzvi, avo vari kuwedzera kuva neyakaomarara pakugadzira chishandiso "chakagadzirwa muCalifornia", pamusoro pese maMac.
Uye iyo nyowani Apple silicon vanoenderera mberi nemutsara uyu. Hapana mukana wekuwedzera yako RAM, kana yako SSD yekuchengetedza. Mune dzidziso, sezvo zvinoita sekunge kuChina vakatowana. Ndinovimba vanonatsa hunyanzvi, uye vatumire tutorials kuYouTube maitiro ekuzviita. Vanopfuura mumwe chete vanoedza, zvechokwadi.
Sezvinoonekwa mune akasiyana masocial network muChina, vamwe mahunyanzvi kubva munyika iyoyo vakakwanisa gadziridza RAM uye SSD yekuchengetedza mune nyowani Apple Silicons, zvichiratidza kuti iyo nyowani nguva yeM1-yakavakirwa Mac makomputa inogona kuve inochinja kupfuura yekutanga kufunga.
Mishumo kubva kune vanochengetedza matekinoroji avo vakakwanisa kuwedzera iyo memory and the kuchengetedza yeMac M1s yakatanga kutenderera paChina nhepfenyuro yemagariro mukupera kwesvondo, asi izvozvi mishumo yepasi rose yatanga kujekesa mamiriro
1 Kuwedzera iyo RAM uye SSD yeApple Silicon inogoneka
2 Maitiro acho akaomarara uye ane njodzi
Kuwedzera iyo RAM uye SSD yeApple Silicon inogoneka
Iyo mikana yekukuvadza iyo mamaboard kana ichishatisa yakanyanya kwazvo.
Hardware mahunyanzvi muGuangzhou, China, vaona kuti zvinokwanisika kupatsanura iyo RAM yeiyo mamaboard yeApple Silicon uye yayo SSD module zvakare, uye wozvitsiva nezvinhu zvepamusoro zvinokwaniswa, zvinozivikanwa nemazvo neMacOS, nokudaro zvichiwedzera kugona kwemuchina.
Seumbowo, huwandu hukuru hwemifananidzo hwakaburitswa pa internet iyo inoratidza maitiro ekukudziridza base modhi M1 MacBook Air ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetedza, zvinoitika kuve iine 16 GB ye RAM uye 1 TB yeSSD , kushanda zvakakwana mushure mekuchinja mu macOS Huru Sur.
Iyo RAM uye SSD zvikamu mune Apple's Mac M1s ari saleados kubhodhi reamai, izvo zvinoita kuti maitiro acho anyanye kuoma, uye panogona kunge paine mukana wakakura wekuti haukwane zvakanaka. Iyi isina kujairika isina kugadziridzwa zvakare inotyora garandi yaApple.
Apple yaita kuti zviwedzere kuomera vashandisi kugadzirisa avo maMacs pamusoro pemakore. Zvaitaridza kuti neApple Silicon iyi pfungwa yakatosimbiswa, iine macomputer ese eMac M1 akanyatsobatanidzwa. Iko mukana wekusimudzira ndangariro uye kuchengetedza kweMac M1, kunyangwe mune maitiro inopinda uye ine njodzi, inoita kunge yakakosha uye ine tariro kuwanikwa.
Maitiro acho akaomarara uye ane njodzi
Pano iwe unogona kuona maviri 512 GB SSD ma module anotsiva iwo 128 GB iwo.
Nekuda kwekuoma kwekusimudzira iyo RAM kana SSD, zvingangoita kuti vese varidzi veM1 vachazofanira kuvimba nekurangarira uye chengetedzo kumisikidza kwavakasarudza panguva yekutenga, pamwe nekukwiridzirwa kune vashoma 'vafambi"Kunyangwe zvave zvichinzi M1 Mac memory uye yekuchengetedza yekuvandudza muAsia zvichave zviripo nenzira zvisiri pamutemo.
Zvirinani izvozvi varidzi veApple Silicon vanogona kuve netariro kuti iyi yekuwedzera nzira icha "kugadziriswa" uye munguva pfupi ichave iri inoshanda kukwanisa kuwedzera RAM kana SSD yeMac yako nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chinese mahunyanzvi anokwanisa kuwedzera iyo RAM uye SSD yeApple Silicon
Nomad Anoburitsa Yekupedzisira MagSafe Chaja Doko